November 26, 2020 RESTBET 501 RESTBET501 5
“ကူးစက်ရောဂါကြောင့်အပြင်ဘက်ကိုပရိသတ်တွေမမြင်ရပေမဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့စိတ် ၀ င်စားမှုကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ လူမှုမီဒီယာကိုကြည့်တိုင်း Fenerbahce ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငါတွေ့တယ်။ ငါဒီကိုရောက်တော့ Galatasaray နဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းချက်ချင်းပဲငါ့ကိုပြောပြတယ်။ ဒါရိုက်တာ၊ သမ္မတနှင့်ကစားသမားများကဒါဘီအကြောင်းပြောပြသည်။
Fenerbahçe – Galatasaray ဒါဘီသည်အလွန်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည် Paris-Marseille ဒါဘီနှင့်တူသည်။ ဒါဟာအရမ်းကိုထူးခြားပြီးအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပါ။ အငှားယာဉ်မောင်းက ‘မင်းလိုချင်တဲ့ပွဲကိုမင်းရှုံးပြီ၊ Fenerbahce ပရိတ်သတ်တွေကသူတို့ကဒီပွဲမှာသူတို့ရပ်တည်ချက်မှာမရနိုင်ရင်တောင်သူတို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားနဲ့ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက Galatasaray သည်KadıköyရှိFenerbahçeကိုနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီပွဲဟာငါတို့အတွက်လက်စားချေပွဲပဲ။ ကျနော်တို့အိမ်မှာသူတို့ကိုရိုက်နှက်လိမ့်မယ် “ဟုသူကပြောသည်။
SUPERTOTOBET0120 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” RESTBET501 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” BETBABA138 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” BETBABA100 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” SULTANBET561 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” RESTBET501 BELHANDA GALATASARAY’IN ELİNDE KALDI! RESTBET501 KORONAVİRÜSE YAKALANAN RYAN BABEL’DEN İYİ HABER GELDİ SUPERTOTOBET0120 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER BETBABA138 GALATASARAY’DA FLAŞ MUSLERA KARARI! BETBABA138 BELHANDA GALATASARAY’IN ELİNDE KALDI!
5 Comments on SUPERTOTOBET0120 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!”
İREM November 27, 2020 at 1:50 am
CEM November 27, 2020 at 4:50 am
HAŞMET November 29, 2020 at 2:20 am
CÜNEYT November 29, 2020 at 8:40 pm
BİRSEN November 30, 2020 at 11:10 am